ယောက်ျားတွေရဲ့ ဣတ္ထိယ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားအမှန် | ATK's Explicit Blog
ယောက်ျားတွေရဲ့ ဣတ္ထိယ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားအမှန်
တကယ်တော့ဗျာ၊ ယောက်ျားတိုင်း ကြိုက်ပါတယ်၊ သဘောကျပါတယ်လို့ အပြည့်အဝ အာမခံနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းကို တန်းပြောပါဆိုရင် ဘယ်သူမှ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။ တင်ပါးကိုမှ အာရုံကျတတ်တဲ့ ယောက်ျား၊ ခြေသလုံးကိုမှ နှလုံးသွင်းတတ်တဲ့ ယောက်ျား၊ ရင်ကိုမှ မင်တဲ့ယောက်ျား၊ ခြေဖနောင့်ကိုမှ စောင့်ကြည့်တတ်တဲ့ယောက်ျား၊ ဆံပင်ကိုမှ ခင်တွယ်တဲ့ ယောက်ျား၊ အိုး… အစုံပါခင်ဗျ။ အဲတော့ကာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က ဘယ် အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ပြောကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ ထပ်ပြောမယ်နော်… ဘယ်နေရာလေးကိုမဆို ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဆံဖျားကနေ ခြေဖျားအထိ၊ ကြိုက်တဲ့နေရာ ပြောကြည့်။ အဲ… အဲဒီ့အပိုင်းလေးကိုမှ ရွေးပြီး စုံမက်တဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက်ကတော့ ဤမဟာဘဒ္ဒကမ္ဘာမှာ မသွေမုချ ရှိကို ရှိနေရမှာ မလွဲဧကန်ပါခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်အိမ်သူကိုဆိုရင် ပေါင်းလာတာ ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ အပျိုတုန်းကတော့ သူလည်း ငါးရံ့ကိုယ်နဲ့ပါပဲ။ ကလေးနှစ်ယောက် မွေးပြီးတော့ သူ့ကိုယ်လုံးက ပုံပျက်သွားပြီ။ ပထမကလေးကို မွေးပြီးစတုန်းကဆို တော်တော်ကြီးကို ဝလာခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ ဝလာလို့ ကျွန်တော်ဖြင့် တစ်စက်မှ စိတ်မပျက်ခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် ပိုတောင် သဘောကျမိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မမက ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော် ဝါသနာဘာဂီ ဆက်တိုင်းမှီမို့ ကွယ်ရာမှာ ခြေများမိတာကိုပဲ သူ ဝလာလို့ ဖြစ်ရတယ် အထင်ရောက်ပြီး ပိန်အောင် ပြန်လုပ်ယူတယ်ခင်ဗျ။
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ခန္ဓာလေး မဆိုစလောက် ဝဖိုင့်နေတဲ့အတွက်ပဲ ဖြစ်စေ၊ အပျိုတုန်းကထက် ပေါင် အစိတ်လောက် ပိုဝလာလို့ပဲဖြစ်စေ စိတ်ဆင်းရဲနေကြသူ မမများ နားလည်အောင် ယောက်ျားတွေရဲ့ ဣတ္ထိယခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားအမှန်ကို ထုတ်လှန် တင်ပြလိုက်ရတာပါပဲခင်ဗျား။
from → For Women, Information
← ကျား-မတို့ အကြိုက်များနဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံ
အပျိုမြှေး အတု လုပ်လို့ ရနေပြီတဲ့… →
Good point. I feel quite encouraged and kind of relieved for I have been stressed about my tremendous weight gain overacouple of years. Thanksalot for this article.
But , on the other hand, I still believe that “small” is “beautiful” and still havingastrong urge to shredafew extra kilos. I’m on slimming aids, by the way. =( No significant difference yet.
I asked “KKM” if he liked me slim or “this” way. He said I’d look better if I toned downabit. Not sure if he was completely being honest though.
Khine Soe Lin permalink
ကျွန်တော်တောင်ကို့ချစ်ချစ်လေးကို ဘယ်နေရာကြိုက်လဲ ရှာဖွေလိုက်ပါဦးမယ်။
Facebook မှာ ရေးသွားတာတွေကတော့…
Khin Min Zaw: မေးကြည့်ဦးမှ 😛
Min N. Mg: မှန်တယ် မှန်တယ် အရမ်းမှန်တယ် ဆရာ… ၀န်ခံတယ်…
Khin Pyaitwonn Thawtar: something new to learn 🙂 thanks, Sayar
Moreen Gao: ဆရာ ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီးမှ နည်းနည်း အားရှိလာသလိုပဲ……….. ;P
ကောလိပ်ကျောင်းသား မောင်သောင်းဖေ : မှန်ပါ့ဗျာ.. ကျွန်တော်ဆိုရင် နားရွက်နောက်က ဆံစပ်ကလေးတွေ ဆံပင်စည်းထားလို့ ပေါ်နေရင် လွှတ်သဘောကျတာကလား….
ကျွန်တော်ဆိုလည်း မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ငွေ့ဓါတ်ကို ပိုပြီးမင်တယ် ..
ကိုယ်ငွေ့ဓါတ် ခပ်နွေးနွေးလေးနဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်နားကပ်လျက်ရှိနေရင်ကို ရုပ်မမြင်ရသေးဘူး ရင်ခုန်ခြင်လာတာဗျ .. ရင်ခုန်တယ်ဆိုတာကလဲ တခြား မရိုးမသားမဟုတ်ဘူးနော် .. ဒိန်းတလိန်းနတ် ဖမ်းစားသလို .. တဒိန်းဒိန်းနဲ့ အဖြူထည်လေးခုန်တာပါဗျ …
ဆရာရေ .. ကြုံတုန်းလေး မိန်းခလေးတွေရော ဘာတွေ သဘောကြတတ်သလဲ ဆိုတာလေးတော့ ပြောပြပါဦးနော် ..
ကျွန်တော်တို့လည်း အားတတ်ချင်လို့ပါ ..
win min oo permalink
ဘာမှမဟုတ်တာကို ပြသနာမရှာတတ်တဲ့မိန်းမမျိုးကို ဘယ်ယောက်ကျားဖြစ်ဖြစ် မမေ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်….. ဗဟုသုတတွေအများကြီးရပါတယ်… မိန်ကလေးဆိုတာ တခါတလေ အသေးအဖွဲ လေးတွေကိုတောင် အရေးတယူလုပ်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲတတ်ကြပါတယ်… ဆရာ့စာဖတ် လိုက်တော့ကိုယ်ကိုယ့်ကိုအရမ်း confident ရှိသွားတယ်… ဟဲ..ဟဲ.. 🙂 … သမီးကတော့ boy တယောက်ကို ကြည့်ရင် ခြေထောက်နဲ့လက်ကိုကြည့်တယ်… လူမလှရင်တောင် တချို့က ခြေထောက်လေးတွေ လက်လေးတွေ အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်…. by the way သမီးkoko ကို့ ကြိုက်လိုက်တာ ပါးသိုင်းမွှေးကြောင့်ထင်တယ် … တချို့တွေက ပါးသိုင်းမွှေးနဲ့ အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ် …. ဟီးဟီး …ကိုယ့်ထက်အရပ်ပုရင်တော့ ရင်ခုန်နေရင်တောင် ကျောပေးထားပါတယ် …..
july ko permalink
စာရေးဆရာက ခြေများတာတွေ ထည့်ထည့်ရေးနေတော့ စာဖတ်သူတွေ အားကျစိတ်တွေ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ သိချင်လို့မေးတာနော် ကောင်းကောင်းဖြေ
july ko မေးတဲ့ပုံကိုလဲပြန်ကြည့်ပါအုံး ဆရာ့ကိုမလေးစားရင်နေပါ စာတွေကိုတော့လေးစားသင့်ပါတယ် ဆရာရေးနေတာတွေက အိမ်ထောင်ရေး မှာဖြစ်တတ်တာတွေ လုတွေမှာဖြစ်တတ်တာတွေကို သု့အသက်အရွယ်အတွေ့အကြုံနဲ့ ဖြစ်တတ်တာတွေကိုသဘာဝကျကျရေးထားတာတွေပါ စာဖတ်သုတွေထဲမှာ ဦးနှောက်မရှိပဲ ကိုယ်တိုင် ချင့်ချိန်မစဉ်းစားပဲ ဆရာပြောသမျှမှန်တယ်လို့ မထောက်ခံသလို လိုအပ်ရင် ဖြည့် ပိုနေရင်ဖြုတ် ကိုယ့်ဦးနောက်နဲ့ကို စဉ်းစား ပြီးမှ လုပ်ရမှာပါ ကောင်းကောင်းဖြေ ဆိုတာက ကလေးတစ်ယောက်ကို ဆ၇ာတစ်ယောက်က အမိန့်ပေးတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ် ဆရာနဲ့ရင်းနှီးလွန်းလို့ပဲဖြစ်ပါစေ ဘေးလုအမြင်မှာတော့ မသင့်တော်ပါဘုးရှောင်စေချင်ပါတယ် ကို့စာတစ်လုံးကဘယ်အခြေနေရောက်သွားလဲဆိုတာ အစထဲကစဉ်းစားပြီးမှ ရေးသင့်ပါတယ် juiy ko ရေးတဲ့ စာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဆရာ့ ဘလောက်စ် ကိုလာရောက်ဖတ်နေကြတဲ့ သုတွေအားလုံးမြင်ရတာပါ …
ဆရာ့စာတွေကို သရဖူမင်္ဂဇင်းမှာပါတည်းကဖတ်လာတာပါ အဲ့ဒီတည်းကဖတ်ခဲ့ပေမဲ့ အမှားတစ်စုံတစ်ရာကျူးလွန်မိတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အပြင် ဗဟုသုတတိုးပြီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေနားလည်လာပါတယ် လက်ခံယူတဲ့သူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ် ဆရာ့စာတွေက အကျိုးရှိပါတယ်ဆရာ ဆိုဒ်ကိုတော့ခုမှရောက်လာတာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာဒီထက်စာတွေအများကြီးရေးနိုင်ပါစေ….
Htay Win permalink
Good for used and new to life
ဘယ်နှစ်ခါ လောက်ဆက်ဆံမှ အမျိုးသမီးမှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မလဲ ကျတော် အမျိုးသမီးမှာ ဘာမှမခံစားဘူးလို့ပြောပါတယ်